Emine Erdoğan iyo jilaaga caanka ah Aamir Khan oo ku kulmay Istanbul | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Emine Erdoğan iyo jilaaga caanka ah Aamir Khan oo ku kulmay Istanbul
Jilaaga Caanka ah ee Bollywood Aamir Khan ayaa Turkiga ku sugan si uu halkaas ugu sameeyo filimkiisa lagu magacaabo ‘Laal Singh Chaddha’.
Qoraalka sawirka,Emine Erdoğan iyo Aamir Khan
Jilaagan ayaa Turkiga ku sugnaa tan iyo isbuucii la soo dhaafay, isagoo raadiyayay meelo uu ku sameyn karo filimka oo daba socda mid la sameeyay 1994-tii. Jilliinka filimka cusub ayaa la joojiyay ka dib markii cudurka coronavirus uu ka dillaacay Hindiya.
Qeybaha hore ee muuqaalka waxaa lagu sameeyay Hindiya, inta ka dhiman waxaa lagu jili doonaa gobollada qaar ee Turkiga sida Niğde, Adana iyo Istanbul.
Wuxuu diyaarinta filimka uu ku casuumay Marwada Koobaad ee Turkiga, xaaska madaxweyne Erdogan oo lagu magacaabo Emine Erdoğan.
Kullankii Sabtidii oo uu dalbaday Aamir Khan, wuxuu ka dhacay dhismaha Huber Mansion ee magaalada Istanbul.
Wuxuu jilaagan Bollywood uga sheekeeyay xaaska Erdogan, arrimo ku saabsan billaabidda mashruuca la xiriira Masuuliyadda Bulshada sida Hay’adda Biyaha taas oo ay aasaastay xaaskiisa Kiran Rao, si ay biyo u gaarsiiso meelaha abaarta ay saameysay ee Hindiya, sida ay ku warrameen qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga iyo Hindiya.
Aamir Khan xaaskiisa ayaa muddo kooban ku noolayd dalka Turkiga “halkaas oo ay ka baratay arrimaha bulshada Turkiga iyo in labada bulsho ee Hindida iyo Turkiga ay meelo badan isaga mid yihiin”.
Aamir Khan wuxuu sheegay in “Marwada Koobaad ee Turkiga ay wado mashaariic bulsho oo muhiim ah iyo arrimo gargaar”, sida lagu qoray wargeyska Daily Sabax ee Turkiga ka soo baxa.
Sidoo kale, Emine Erdoğan, ayaa jilaagan caanka ah ugu hambalyeysay sida aflaantiisa uu diiradda ugu saaro dhibaatooyiinka bulshada iyo sida wax looga qaban karo.
Xaaska Madaxweynaha Turkiga ayaa barteeda Twitterka ku qortay: “Waxay ahayd farxad wayn inaan la kulmay Aamir Khan”.
“Jilaagan caanka ah ee aflaantana sameeya soona saara, wuxuu ku sugan yahay Istanbul. Aad ayaan ugu faraxsanahay in Aamir uu go’aansaday in filimkiisan ugu dambeeya ee ‘Laal Sing Chaddha’ qeybaha ka harsan uu ku jilo gobollada Turkiga. Waan sugayaa si aan u daawada”, ayey hadalka ku dartay.
Marwada Koobaad ee Turkiga, waxay sannadkii 2017-kii bilowday mashruuc aad u caanbaxay oo loogu yeero “mashruuca ah inaan cuntada la daadin”
Xaaska Madaxweyne Erdogan iyo Aamir Khan arrimaha ay ka sheekeysteen waxaa ka mid ahayd xiriirka dhaqan ee labada bulsho sida dharka, cuntada iyo farsamada gacanta ee ay isaga midka yihiin.
Jilaagan ka tirsan Bollywood, Aamir Khan ayaa booqday gobolka Adana, wuxuuna halkaas kula kulmay qaar ka mid ah taageerayaashiisa.
Emine Erdoğan iyo jilaaga caanka ah Aamir Khan oo ku kulmay Istanbul was last modified: August 17th, 2020 by Admin
Faafaahin Qarax Khasaare geysatay oo ka dhacay degmada Beled Xaawo Gobalka Gedo
Taiwan opens ‘diplomatic’ office in Somaliland
SAWIRO:-Taliyaha Cusub ee Ciidanka Kenya oo booqasho ku yimid Somaliya kana hadlay dagaalka Al-Shabaab
Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka oo shaaciyay dib u dhigida Furitaankii Kalfadhigii 7aad
Sii Hayaha Wasiirka Shaqada Oo Booqday Xarunta Guddiga Shaqaalaha Rayidka Ee Dowladda “SAWIRRO”
Dhageyso wareysi Dhowlada iyo Baarlamaaanka ku Weeraray Chief Sagaarey.
Qaramada Midoobey iyo IGAD oo ka wada hadlay Arrimaha Soomaaliya
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Jubbaland oo ku dhintey qarax gaarigiisa loogu xirey
Mareykanka oo sheegay in wadaxaajood uu u furaya DFS iyo Al-shabaab